Izaho manirery | Ity fiainako mampalahelo!
youpi! vita ny taratasiko!
Posted by: Toky on: février 22, 2011
Dans : ny amiko
Bon , misy maromaro zany ianareo no nanontany ahy hoe maty ve hono izaho fa tsy nanoratra teto intsony. AAA ka! velona be, ary toa velona be loatra ndray aza.
Tsara ny vaovao satria dia vita soa aman-tsara ihany ny taratasiko na dia somary nananosarotra ihany aza.
Mila vaniny ny préfécture @ izao fotoana izao, nila pièce justificatives be dia be ry zareo, asia foronina daholo ity atsanga tsy aman’orana rehetra ity, miandry adiny 3 ianao vao voaray (enfin, c’est une histoire de queue mais pour le coup, j’ai pas aimé!). Fa na izany aza anefa dia nitondra vokan-tsoa izany. Isaorako ny vady malalako izany satria raha tsy teo izy, tsy hilamina toy izao izaho.
Raha fintinina @ teny tsotsotra ny nataonay dia izao: nanao PACS izahay aloha, dia nanangona preuves de vie communes be dia be (mila preuve iray isam-bolana farafaharatsiny), avy eo dia mametraka dossier any @ préfécture rehefa 1 taona après ny pacs.
Ny mampiaiky dia mila mandoa hetra ny olona vao mahazo taratasy!!! nandoa 70 euros izaho @ taxe de chancellerie ary 340 euros ho an’ny office de l’immigration! Vidiana lafo le te hijanona aty lol.
Dia lasa mitady asa @ izay zany izao no atao. Enga anie ka hahita @ ity contexte economique mbola tsy milamina ity.
Dia misaotra anao namaky hatrany e.
Étiquettes : immigration, pelaka, taratasy
Asa ataoko @ izao? manampy olona hanao vetaveta
Posted by: Toky on: mars 29, 2010
Dans : Andavan'andro
Gagagaga ihany aho raha sendra nitsidika ny tranonkala takelaka.org satria ity tranonkalako ity no hitako teo @ page d’accueil. Mba tsy nampoiziko koa iny marina, nefa na izaho aza tsy nahatadidy intsony hoe nanao ity moa kay izaho.
Noho izany dia tantaraiko indray ny fiainako faramparany.
Ny resaka taratasy aloha dia mbola tsy misy tokontaniny. Efa voaangona daholo ny dossier rehetra ilaina fa mila mankany @ préfécture izany izahay, nefa i Christian miasa be loatra ka tsy dia manampotoana firy. Dia miandry fa gasy koa, nefa tsy omeko tsiny izy na izany aza.
Avy eo ny fiainana @ ankapobeny indray dia mandeha ratsy eny. Raha ny resaka fandehanana mijery spectacle sy parc d’attractions no mahasambatra, dia azo lazaina fa hoe sambatra sy tretrika izaho. Satria dia mandeha matetika @ ireny zavatra ireny izahay. Endrika ivelany ihany anefa izany, satria « au fond » dia tsy tena sambatra loatra noho ity resaka taratasy ity, ary ny olana mipetraka eo @ fianakaviana koa etsy andaniny.
En tout cas, misaotra an’Andriamanitra aho hoe mbola tsy matory eny ambany tetezana, na tsy mihinan-kanina, fa dia mbola mitovy @ olona rehetra ihany aloha. Fotsiny hoe ny taona mandeha dia mandeha, ny tena ity tsy ambony tsy ambany toy ny lohalik’alika…lol.
Misy fotoana miasa, ary be dia be koa ny fotoana tsy iasana. Inona hoy nareo no ataoko rehefa tsy miasa izaho? Dia eo ambody ordinateur eo izany no misary gaigy miaraka amina vazaha erak’izao tontolo izao, mampiseho bika (plan cam na jerk off hoy zareo mahay azy izay).
Mahalasa saina ahy ihany ilay izy satria misy fotoana aho dia eo manomboka @ 9 maraina ka h@ 5 hariva. Ny ora mandeha nefa ny zava-bita tsy misy. Fotsiny hoe on ne voit pas le temps passer comme ça. Dia misary gaigy anie izany e. Vita ny plan cam miaraka @ rakoto, dia miditra indray rabe… dia toy izany hatrany mandra-paha-leo.
Tao ho ao dia mahatsiaro tena ho lasa andevo-na plan cam izany aho. Te hiala nefa toa lasa addiction ilay izy. Drogue mihitsy e. Misy an’izany hoe tsy matory raha tsy @ 2 maraina fa mbola manao plan cam aloha. I Christian aza lasa ambanin-javatra sisa indraindray satria izy te hatory aloha be, izaho anefa tsy mbola te hatory akory dia lasa izy ary izaho tavela eo ambody ordinateur.
Ny tombom-barotra kely angamba dia hoe à force de fréquenter des mecs du monde entier, dia lasa mahay anglais vinaninany izany izaho. Enfin, tsy tena hoe vendrana be koa aloha ny tena na izany aza, fa lasa misy amélioration izany. Fa raha ny fotoana lany no jerena dia faty antoka iray lavaka. Ary lavaka ngeza be mihitsy. lol.
Voilà voilà, izay indray ny news tao ho ao. Mbola tsy maty aloha izaho fa ity eto ihany, velona mitsipozipozy hoy ny fitenenana.
Mivavaha ho ahy ry reto a.
Étiquettes : asa atao, vetaveta
Posted by: Toky on: novembre 16, 2009
Tady, toy ilay fitaovana natao hamatorana entana, na zavatra anankiroa, nefa tsy zavatra ihany anefa fa mety ho olona ihany koa, na mety ny saina, na ny eritreritra.
Tady, toy ilay tadim-poitra nampitohy ny zaza amin’ny reniny fony izy tany am-bohoka.
Tady, toy ilay rohy mampitohy sy mampihavana ny mpianakavy, ny mpinamana, ny mpifankatia.
Tady, toy ilay rohy tapaka rehefa mandeha manam-bady ny zatovo ka hikopa-kelatra.
Tady, toy ilay fatotra mangeja ny olona sasany ka mahatonga azy ireo tsyafaka mikofoka, tsy afaka misaina ary tsy afaka mamakafaka noho ny firehan-kevitra, finoana, fombafomba isan-karazany.
Tady, rohy mamatotra nefa mety hangeja ary mety tapaka ihany koa rehefa samy miziriziry amin’ny heviny ny tsirairay.
Tady, natao hatsipy hanavotana olona anaty fotaka mandrevo, anaty fahaverezana…
Tady, hatsipy eny an-tandroky ny omby ary teny atsipy ho an’ny mahalala (indrindra ho an’ny fianakaviako raha kisendrasendra ka mamaky ity lahatsoratra ity izy ireo).
Satria ho avy tsy ho ela any madagasikara aho hiatrika anareo, toy ny olona nanao fahadisoana ary hiatrika fitsarana, kanefa anie ny helony dia tsy inona akory fa ny fitiavany hafa endrika, fitiavana lazaina fa mamoafady, kanefa fitiavana ihany na izany na tsy izany.
Andeha any Madagasikara satria mety izay no:
– hampitohy indray ny rohy nampitohy antsika mianakavy hatrizay
– hamaha ireo fatotra nangeja antsika hatrizay noho ny fijery tsy mitovy, ny firehan-kevitra… mba hitovizan’ny tadin-dokanga.
– hanapaka ihany koa ilay rohy nampihavana antsika satria mety tsy hisy fanafodiny intsony raha ny fihavanana eo amin-tsika no resahina (satria samy tsy misy mety hilefitra na ny andaniny na ny ankilany).
Na izany na tsy izany dia ho avy aho, miaraka amin’ny tadiko…
Étiquettes : rohy, tady
Posted by: Toky on: juillet 31, 2009
Fialan-tsasatra izao ny aty andafy. Lasa mamonjy moron-dranomasina avokoa ny ankabetsahan’ny olona, hany ka toa mangadihady be izany ny tanàna. Na ny mpifanolo-bodi-rindrina aza dia tsy misy ao. I Christian koa izany miasa foana, mandeha maraina ary tsy mody raha tsy hariva. Ny malagasy anefa tsy miasa @ izao fotoana satria lasa niala sasatra koa ny mpampiasa. Dia inona moa fa dia miandry trano no atao, na miantso antariby. Satria na ny namana aza dia lasa avokoa, dia inona fa dia manirery e.
Ny hany fanalana andro dia mijery olona miboridana @ webcam, dia taraiky eo. Manomboka @ 10 ora maraina eo ny fijerena olona miboridana, ary tsy mitsahatra izany raha tsy @ 5 ora hariva, ora fikarakarana sakafo hariva, sady fampirimana trano koa alohan’ny ahatongavan’i Christian!
Ny eritreritra @ io manenjika ihany. Lasa ny saina hoe ity izaho dia lany andro mampidera bika sy mandany andro mijery vazaha miboridana. Toa lasa zava-mahadomelina ho ahy ilay fijerena vazaha miboridana, sy mampiseho ny vatako ao @ Internet. Nefa io sisa no fandaniana andro, satria raha tsy manao io izaho dia toa ela be izany vao hariva ny andro. Indrisy!
Tsy andry ny ahatongavan’ny sabotsy sy alahady, satria mba samy eo izahay roa @ izay, dia mba misy mangirana ilay fiainako. Soa ihany aza fa eo izy, mba manala fahasorenana, mba manampy ahy hahatsapa fa tsy irery tokoa aho fa mbola manana azy mitsinjo ahy. Raha tsy teo angamba izy dia mety efa ho nanao foana aho tahaka izay. Nefa mbola tsy eo @ izay sehatra izay aloha izaho hatreto.
Étiquettes : fialan-tsasatra
Posted by: Toky on: juillet 7, 2009
Manga… toy ilay lanitry ny fifankatiavan-tsika roalahy fahiny, fony isika mpianatra. Manga, toy ilay ranomasina nampianaran’ialahy ahy nilomano fony aho vato alatsaka (!), nefa manga ihany koa, toy ilay voankazo maniry teo antokon-tanin’ilay sekoly niarahan-tsika.
Sendra nividy io manga masaka io aho (70.000 fmg vola gasy ny vidin’ilay manga iray aty!!!) no nahatsiaro an’ialahy, nahatsiaro antsika, ilay fiarahana taloha. Mamy ery izany fiarahana izany, toy ireo manga niarahana nihinana. Satria tokoa mantsy ialahy no havanana @ fianihana, dia izaho izany ilay « miandry mahazo » ety ambany. Nefa tena tsy havanana tokoa ve izaho @ fianihana hazo? Sa kosa fitiavana te hijery an’ilay olon-tiako mananika ny avo no nanosika ahy hijanona teny ambany. Ilay sandrinao mamihina ireo ratsan-kazo, ilay ranjonao mafy sy mahery manavatsava ireo sampan-kazo… ary izaho variana sy talanjona hatrany hatrany mijery sy mandinika anao, ilay voaloham-pitiavako.
Manga, mariky ny fitsinjovanao ahy ihany koa. Impiry moa aho no tsy afaka niaraka taminao tany an-ala, nefa dia nitondranao manga, na dia navesatra taminao aza ny nilanja izany hatrany am-pianarana.
Manga, toa voankazo ihany, nefa mariky ny fiarahan-tsika. Ilay fampiarahana eny ambodi-manga harivariva mody masoandro iny. Isika nifampitantana anaty ala-manga satria tsisy mahita. Isika afaka naneho ny fitiavan-tsika satria toy ny irery eto ambonin’ny tany saroman’ireo ala-manga.
Voankazo mety lo anefa ny manga. Fa ny fitiavako anao ry ilay tiako, na dia any an-tany lavitra aza aho, dia tsy ho lo na oviana na oviana.
Satria na dia efa 10 taona lasa aza izay, na ranomasina aza no manasaraka antsika, na dia efa manambady aman-janaka aza ianao, dia tiako ary ho tiako foana ianao ry ilay olon-tiako, ilay notiaviko ary ho tiaviko mandrakizay.
Étiquettes : ialahy, manga
Posted by: Toky on: juin 12, 2009
Miarahaba anareo mpamaky indray.
Hafa be ilay lohatenin’ity lahatsoratra ity. Vongan-kena! toy ny hoe hena amidy eny analakely izany, misy lalitra indraindray…lol.
Nefa dia toy izany matetika no fahitan’ny olona sasany ny vahiny aty an-tany lavitra aty. Vao hoe somary maintimainty ianao, na somary « sôkôla »…dia mitangorona ny fotsy hoditra. Hoy angamba ry zareo hoe « iny misy hena be mandehandeha »! Tsy haiko aloha ny zatovovavy malagasy aty ampita na tojo an’izany koa, fa izaho dia be « mpikôty » eo @ olona gay. Tsy vitsy ny olona no mikôty, misy aza te handoa vola mihitsy, ary efa nisy ihany koa ny saika hampanao film porno ahy. Izaho dia variana mihitsy hoe fa dia nahoana aza.
Azo jerena @ lafy tsarany ihany anefa izany, satria matoa ianao misy mikôty dia mety tsy dia ratsy loatra angamba, raha ny bika no jerena. Nefa ny lafy ratsiny dia mampalahelo ny fijerin’ny sasany, tsy mahita afa-tsy ilay olona vahiny « azo asiana » satria mety manana olana ara-bola, na mety tsy manan-kialofana…
Tsy hoe akory manao safo-be mantsina ny olona tompon-tany izaho, satria misy dia misy tokoa ny olona tompon-tany tsy manao izany, ary ny olona gay no tiako resahina eto fa tsy ny hetero. Kanefa anatin’ny lalao daholo izany, angamba. Tsy haiko aloha.
Étiquettes : vongan-kena
Posted by: Toky on: juin 8, 2009
Tapak’andro monja, anehoana @ besinimaro ny maha-gay ny gay, entina hanairana ny besinimaro fa misy zavatra tsy rariny mahazo ny sarangan’olona (zo, adidy, andraikitra…), tapak’andro monja ahafahana mifampitantana eny an-dalana, ary tapak’andro monja ahafahana maneho ny besinimaro fa afaka mifankatia ny samy vehivavy, ny samy lehilahy.
Fohy anefa mafonja…
Fotoanan’ny gaypride tokoa izao. gaypride natao hiadiana ny zo, mba hisian’ny fitoviana eo @ hetero sy homo, eny fa na dia mbola lavitr’ezaka aza izany vao ho azo, raha ho azo. Nefa koa gaypride natao hifaliana, ary dia nifaly tokoa moa izany. Toa zary hadino ny olana maro samihafa mianjady @ maha-gay, indrindra moa fa ireo olana marobe mahazo ahy. Tsara ho ahy koa izay satria tsy manana afa-tsy tapak’andro tsinona, ka raha mbola hanjombona sy tsy hifaly dia tsy misy dikany ny hamonjena gaypride.
Maro ny tsy fitoviana eto an-tany, tsy mitovy zo ny lahy sy vavy, ny fotsy sy mainty any @ firenena sasany,… tapak’andro firy no ilaina entina hanehoana fa misy ireo olana @ tsy fitovian-jo ireo. Tapak’andro firy no ilaina ahafahan’ireo olona maneho ny ao am-pony…
Ho foana anie ny tapak’andro, ary ho foana koa anie ny tsy fitovian-jo…nefa toa revirevy ihany izany.
Étiquettes : gay pride, tapak'andro
asa atao fialan-tsasatra gay pride ialahy immigration izaho manga manirery mpisandoka ny amiko pelaka rafozana rohy tady tapak'andro taratasy vetaveta vongan-kena
ny amiko (2)